‘सेन्टी भाइरस’ र ‘आमा’ ले दुई दिनमा कति कमाए ? - Harekpal
हरेकपल सम्वाददाता ११ फाल्गुन २०७६, आईतवार १६:४६ मा प्रकाशित
गएको असोज अन्तिममा प्रदर्शनमा आएको दीपकराज गिरी समुहको चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ पछि कुनै चलचित्रले हलमा दर्शकको भीड लगाउन सकेनन् । आश गरिएका चलचित्र समेत बक्सअफिसमा पत्तासाफ हुँदा सुस्ताएको नेपाली चलचित्रको व्यापार महाशिवरात्रीको अवसर पारेर प्रदर्शनमा आएका यस वर्षका दुई आशातित फिल्म ‘सेन्टी भाइरस’ र ‘आमा’ ले केही हदसम्म चलायमान बनाएको छ ।
शुक्रवार र शनिवार सार्वजनिक विदा परेका कारण यी दुई चलचित्रले प्रदर्शनको दुई दिनमा आकर्षक कमाई गरेका छन् । रामबाबु गुरुङ निर्देशित तथा हास्यजोडी सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ अभिनीत चलचित्र ‘सेन्टी भाइरस’ ले प्रदर्शनको दुई दिनमा २ करोड ४७ लाख (पहिलो दिन १ करोड १२ लाख र दोस्रो दिन १ करोड ३५ लाख) कमाई गरेको निर्माण टिमले जानकारी दिएको छ ।
शुक्रवारको तुलनामा चलचित्रले शनिवार कमाईमा ठूलो उछाल कायम गरेको छ । तर, ‘वर्ड अफ माउथ’ राम्रो नभएका कारण आइतबारदेखि चलचित्रको व्यापारमा गिरावट आउन सक्ने देखिन्छ । चलचित्रको आम्दानीको ५० प्रतिशत भरतपुरमा निर्माणाधिन रंगशालामा खर्चिने घोषणाका कारण पनि चलचित्रले प्रदर्शनको दुई दिन दर्शकको राम्रो साथ पाएको चलचित्र पण्डितहरुको तर्क छ ।
त्यस्तै, ‘सेन्टी भाइरस’ सँग एकसाथ आएको दीपेन्द्र के. खनाल निर्देशित चलचित्र ‘आमा’ ले दुई दिनमा सुखद कमाई गरेको छ । वितरक करण क्रेजीले चलचित्रले शुक्रवार ५७ लाख र शनिवार ७३ लाख कमाएको जानकारी दिए । उनी चलचित्रको कमाईबाट सन्तुष्ट रहेको बताउँछन् । चलचित्रको माउथ पब्लिसिटी बलियो भएका कारण विस्तारै हलमा दर्शक बढ्ने उनको विश्वास छ ।
‘आमा’ ले दर्शक र समीक्षकबाट उम्दा प्रतिक्रिया पाएको छ । चलचित्र हेरेका दर्शक हलबाट भावुक हुँदै निस्किएका छन् । समीक्षकले निर्देशक खनाललाई दर्शक रुवाउन लाइसेन्स प्राप्त निर्देशकको ट्याग समेत दिएका छन् । चलचित्रको कथावस्तु, कलाकारको अभिनय र प्रस्तुतीको दर्शक र समीक्षकले प्रशंसा गरेका छन् । चलचित्रको कथा निर्देशक खनाल स्वयंको हो ।
चलचित्र ‘सेन्टी भाइरस’ मा ‘धुर्मुस सुन्तली’ का अलावा दयाहाङ राई, विल्सन विक्रम राई, बुद्दि तामाङ, राजाराम पौडेल, सन्दिप क्षेत्रीलगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । भने, आमा-छोरीको भावनात्मक सम्बन्धको कथा वाचन गरेको चलचित्र ‘आमा’ मा सुरक्षा पन्त, मिथिला शर्मा, सरिता गिरी, देशभक्त खनाल, मनिष निरौला, टिका पहारीलगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ ।
३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ११:११
२९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १८:१८
२२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १२:४६
१५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १२:१४
१३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १३:२२